Ekuseni ngo-Okthoba 20, uXie Yu'an, iPhini likaSihlalo weKomidi Lesifundazwe Lesifundazwe Senkomfa Yezinhlangano Zezepolitiki Yabantu BaseChina, ephelezelwa uZhu Dongya, Iphini Likasihlalo WeNkomfa Yezokuxhumana Yezepolitiki Yabantu BaseMkhandlwini WaseShanghai, Unobhala Wekomidi Leqembu LaseYucheng. UDongmei, uSihlalo weNkomfa Yezokuxhumana Ngezepolitiki Yase County, uhole amanye amalungu e-CPPCC ukuthi aphenye futhi aqondise umsebenzi wethu. UMnu Yang Qian, uMongameli weZhurun ​​Group, noMnu Qiao Hongtao, oyiMenenja jikelele yenkampani, bamphelezele bemazisa kakhulu abaholi ngokufika kwabo nokunakekela.
UMongameli weqembu uYang Qian uhambe nethimba labacwaningi futhi wahlola indawo yokusebenzela abasebenza kuyo umsebenzi wokwakhiwa kwezindlu, ukugcwala indawo yokusebenzela kanye nemishini yokubukisa ngemishini yobhiya yenkampani yethu, kanye nomhlangano wokukhiqiza wezinto zokwakha ubhiya nemishini yokubumba. Iphinde yabika ngokuningiliziwe ngentuthuko yebhizinisi yenkampani, ukuguqulwa kwengqondo kwabafundi, ukucwaninga okusha nentuthuko, kanye necebo leqembu lesikhathi esizayo lokuthuthuka.
Kulolu hlelo, uSihlalo u-Xie, iPhini likaSihlalo weKomidi Lesifundazwe Lenkomfa Yezinhlangano Yezepolitiki Yabantu BaseShayina, ulalele umbiko kaMnu. Yang futhi wabuza ngesimo samanje semikhiqizo yethu eyinhloko (imishini yodaka ehlanganisiwe, imishini yobhiya yezandla, oqondayo umshini wokuhlanza izimoto ongashintshiwe). Usihlalo u-Xie usemukele ngokuphelele ifilosofi yethu yebhizinisi necebo lokuthuthuka, futhi wancoma kakhulu inkampani yethu njengokuwukuphela kwebhizinisi elibamba iqhaza kuzinga likazwelonke elihlanganayo losawoti oluhlanganisiwe. Ithimba labaphenyi lizwakalise ukuqinisekiswa kwabo kwemishini yethu yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, ithimba le-super R & D nemishini yokwenza ubuhlakani ehlakaniphile.
Ekugcineni, uMongameli Yang waveza ukubonga kwakhe kuSihlalo uXie ngokukhathalela kwakhe nokusekela inkampani yethu. Inkampani yethu izosebenza ngokuzikhandla futhi kangcono, izuzise umphakathi wonke ngobuhlakani obuncane futhi obuhle bokufakelwa, futhi ilwele ukuqaphela i- "Chinese Dream"
Isikhathi sokuthumela: Apr-21-2020